अन्तरवार्ता Archives - RatoKalam.com is No one news portal.
काठमाडौँ — प्रधानमन्त्रीले सुरक्षा परिषद्को बैठक नबस्दा पनि सेना परिचालन गर्न सक्ने अधिकारको प्रस्तावसहित संसद्‍मा सुरक्षा परिषद्सम्बन्धी विधेयक पेस भएको छ । यही विधेयकलाई लिएर प्रधानमन्त्रीलाई स्वेच्छाचारी, निरंकुश बनाउन खोजियो भन्दै विरोध भइरहेको छ । प्रमुख विपक्षी कांग्रेसले विधेयकको यी प्रावधानमाथि प्रश्न उठाइरहेको छ । बाहिरबाट पनि प्रस्तावित प्रावधानको आलोचना...
दुई तिहाई मतसहित प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफ्नो गतल क्रियाकलापका कारण विवादित बनिरहेका छन् । कहिले स्वतन्त्र मधेसको मुद्दा बोकेका डा. चन्द्रकान्त (सि.के.) राउतसंग सहमति भयो भन्दै जनमत संग्रह गरिएको बाहिर प्रसार हुन्छ, त कहिले नेत्र विक्रम चन्द विप्लवको पार्टीमाथि राजनीतिक प्रतिवन्ध लगाउने निर्णय गर्छन । ओलीका यी दुबै कार्य...
राजु पोखरेल झापाका सक्रिय युवा पत्रकारका रुपमा चिनिन्छन् । समाचार लेखनसँगै सामाजिक काममा पनि क्रियाशिल पोखरेल मेचि टाईम्स दैनिक बिर्तामोडका सहसम्पादक हुनुहुन्छ । उहाँसँग रातोकलमको पत्रकारिताको विषयमा छोटो मिठो कुराकानी कसरी पत्रकारितामा आउनु भयो ? शुरुमा मलाई समाचार कसरी लेख्छन् र भन्छन् भन्ने लाग्थ्यो । मलाई पनि समाचार सानैदेखि लेख्न मन लाग्ने...
दुई फागुनमा वर्तमान केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले आफ्नो एक बर्षे कार्यकाल गुजार्यो । दुई तिहाई मतको सरकार भएकाले धेरै आम नागरिकले विकास समृद्धि र स्थायीत्वको आशा गरेका थिए । तर, सरकारबाट त्यो हुन सकेन । बरु त्यसको उल्टै सरकारको व्यापक आलोचना भइरहेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले सरकारले विधि...
कैलाली जिल्ला अदालतले सांसद रेशम चौधरीलगायतलाई जन्मकैदको फैसला सुनाएको विरोधमा राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ । यससँगै राजपा नेताका कडा प्रतिक्रिया पनि आउन थालेका छन् । अब फेरि आन्दोलन पो हुने हो कि ? फेरि नेपाली जनताले अर्को नाकाबन्दी बेहोर्नुपर्ने पो हो कि ? जस्ता...
समाजसेवामा विशेष रुचि छःनिमा धिमाल मिस धिमाल २०१९
मिस धिमाल २०१९ को उपाधी उर्लाबारी मोरङकी निमा धिमालले जितेकी छिन् । मिस धिमाल २०१९को शुक्रबार राति उर्लाबारीमा भएको फिनालेमा निमाले १९ प्रतियोगीलाई पछि पार्दै उपाधि जितेकी हुन् । निमाले ताज सहित नगद १ लाख रुपैया प्राप्त गरेकी छिन् । समाजसेवा र मोडलिङमा निक्कै रुचि राख्ने निमासँग रातोकलम डटकमले गरेको...
मुकुन्देको घर पुग्दा : पछिल्लो समयका सबै भाइरल व्यक्ति र विषयमा मुकुन्द घिमीरेको कडा प्रहार भिडियो
प्राय जसो सबैका बिषयमा कडा शब्द प्रहार गर्ने मुकुन्द घिमीरे चर्चा र बिबादका पात्र हुन् । मुकुन्द पागल हो भन्नेको सख्या पनि छ । कडा बिचार राख्ने मुकुन्द घिमिरेसगँ गरिएको कुराकानीमा प्राय जसो सबै भाइरल बिषय र व्यति बारे कडा प्रहार गरेका...
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २ फागुनमा आफ्नो एक बर्षे कार्यकाल पुरा गरेको छ । दुई तिहाई मतको सरकारले जनचाहना अनुरुपको काम गर्न नसकेका आरोप सबै पक्षबाट आइरहेका छन् । तर, सरकारले भने मुलुकमा अग्रगामी छलाङ मार्ने काम सुरु भएका दावी गरिरहेको छ । राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष एवम् पूर्व उपप्रधानमन्त्री...
भीम राई उपमहासचिव तथा संयोजक प्रचारप्रशार उपसमिति किरात राई यायोक्खा केन्द्रीय समिति किरात राई यायोक्खाको १० औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको प्रचारप्रसारको बारे वताईदिनुस न ? किरात राई यायोक्खाको १० औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको प्रचारप्रशारको हामी अहिले मध्य भागतिर आइपुगेको छौ । विस्तारै आक्रमक प्रचार शैली अपनाइदै छ । सवै जिल्लाहरुमा भित्ते लेखन लेख्न, पोष्टरहरु टास्न सर्कुलर...
केपी शर्मा ओली नेतृत्वका सरकार बनेको ३ फागुनमा एक बर्ष पुग्दैछ । दुई तिहाई मत सहितको ओली सरकारले जनअपेक्षा अनुसारका काम गर्न नसकेको आरोप प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले लगाइरहेको छ । भ्रष्टाचार, शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन र परराष्ट्र नीतिका सन्दर्भमा पनि सरकार असफल बनेको छ । सकारको एक बर्षको कार्यकाल...